​အ​ချက်​အ​ချာ​ကျ​ရာ ​နယ်​စပ်​ဒေ​သ​က ​ထိန်း​ချုပ်​ရန် ​စစ်​ရေး​ဆင်​ရာ​လှူပ်​ရှား​မှု​များ​ပြု​လုပ်​ရာ​တွင် ​​မြန်​မာ​စစ်​တပ်မှ ဒေ​သ​ခံပြည်​သူ​များ​ကို ​ဦး​တည်​တိုက်​ခိုက်​မှု​များ​ပြု​လုပ်​လျက်​ရှိ - ရှမ်းလူ့အခွင့်အရေးမဏ္ဍိုင် (SHRF)
​အ​ချက်​အ​ချာ​ကျ​ရာ ​နယ်​စပ်​ဒေ​သ​က ​ထိန်း​ချုပ်​ရန် ​စစ်​ရေး​ဆင်​ရာ​လှူပ်​ရှား​မှု​များ​ပြု​လုပ်​ရာ​တွင် ​​မြန်​မာ​စစ်​တပ်မှ ဒေ​သ​ခံပြည်​သူ​များ​ကို ​ဦး​တည်​တိုက်​ခိုက်​မှု​များ​ပြု​လုပ်​လျက်​ရှိ
​ဇွန်​လ ၅ ​ရက် ၊ ၂၀၁၄
( ၂၀၁၄ ​ဧ​ပြီ​လ ၁၀ ​ရက်​နေ့​မှ ​ဇွန်လ ၂ ​ရက်​နေ့ ​ထိ)
၂၀၁၄ ​ဧ​ပြီ​လ ၁၀ ​ရက်​နေ့တွင် ​မြန်​မာ​စစ်​တပ်​မှ ​တ​ရုတ်​ပြည်​အ​နီး ​ရှမ်း​ပြည်​နယ်​နှင့် ​က​ချင်​ပြည်​နယ် ​နယ်​စပ်​ပေါ်​ရှိက​ချင်​လွတ်​လပ်​ရေး​တပ်​မ​တော် (KIA) ​၏​ထိန်း​ချုပ်​ရာ ​နေ​ရာ​များ​အား​ပစ်​မှတ်​ထား ​ထိုး​စစ်​ဆင်​တိုက်​ခိုက်​မူ​များ– ​ကြီး​မား​ကျယ်​ပြန့်စွာ​ပြု​လုပ်​ခဲ့​သည်။ ​ထို​သို့ KIA ​အား ​ထိုး​စစ်​ဆင်​တိုက်​ခိုက်​ရာ​တွင် ​နမ့်​ခမ်း​မြို့နယ် ​အ​နောက်​ဖက်​ရှိ ​ရှမ်း​ပြည်​သူ​လူ​ထု​များ​စွာ ​စိုက်​ပျိုး​ရာ​လယ်​ယာ​မြေ​နေ​ရာ​ဖြစ်​သည် ​ထွန် ့​လိွုင်​ဟို​ဆေ ​အ​တွင်း​သို ​မြန်​မာ​စစ်​တပ်​မှ ​စစ်​အင်​အား ၁၀၀၀ ​ခန့် ​ဝင်​ရောက်​ကာ ​ရာ​နှင့်​ချီ​သည် ​မော်​တာ​ကျည်​များ​ဖြင့် ​ပစ်​ခတ်​ခဲ့​သည်။ ​ထို​သို ​ပစ်​ခတ်​ခဲ့​ခြင်း​ကြောင့် ​ဘုန်း​ကြီး​ကျောင်း​များ၊ ​အိမ်​များ၊ ​ယာဉ်​များ ​ဆိုင်​ကယ်​များ​နှင့် ​အ​ခြား​သော ​ဥ​စ္စာ​ပ​စ္စ​ညး်​များ ​ထိ​ခိုက်​ဆုံး​ရှုံး​သည့်​အ​ပြင် ​ပြည်​သူ​လူ​ထု​များ​လ​ညး် ​ထိ​ခိုက်​ဒါဏ်​ရာ​ရ​ရ​ခဲ့​ကြ​သည်။ ​ထို ့​အ​ပြင် ​မြန်​မာ​စစ်​တပ်​မှ ​ရွာ​များ ​အ​တွင်း​သို ့​ဝင်​ရောက်​ကာ ​အ​စား​အ​သောက်​များ၊ ​ဥ​စ္စာ​ပ​စ္စည်း​များ ​ကို​လု​ယူ​စား​သောက်​ခြင်း ​နှင့် ​လယ်​သ​မား​များ​၏​ကောက်​ပဲ​သီး​နှံ​များ​ကို ​မီ​ရှို ့​ဖျက်​ဆီး​ခြ​ငး်​များ ​ပြု​လုပ်​ခဲ့ရာ ​ရှ​မ်း ရွာ​ပေါင်း ၁၅ ​ရွာ​မ ​ရွာ​သား​ပေါ​င်း ၁၀၀၀ ​ခန့်တို့​သည် ​ရှ​မ်း​ပြ​ည်​နယ်​မြောက်​ပိုင်း ​အ​တွင်း ​နီး​စပ်​ရာ​မြို့များ ​နှင့် ​တ​ရုတ်​ပြည်​နယ်​စပ်​အ​တွ​င်းသို့ ​ထွက် ​ပြေး ​တိမ်း​ရှောင်​ခဲ့​ကြ​ရ​သည်။
​ထို​သို ့​ထွက်​ပြေး​တိမ်း​ရှောင်​ခဲ့ပြီး ​တစ်​ပတ်​အ​ကြာ ၄​င်းရှ​မ်း​ရွာ​သူ​ရွာ​သား​များ​စု​မှာ ​မိ​မိ​ရွာ​များ ​အ​တွင်း​သို​ပြန်​ခဲ့​ကြ​သော်​လ​ညး်၊ ​နယ်​စပ် ​ကူး​သန်း​ရောင်း​ဝယ်​ရေး​နှင် ​အ​ချက်​အ​ချာ​ကျ​ပြးှီ ​အ​မြတ်​အ​စွ​နး်​ရ​နိုင်​သည် ​ယင်း
​နေ​ရာ​ဒေ​သ​အား ​မြ​န​မာ​စစ်​တပ်​မှ ​ထိန်း​ချုပ်​လိုက်​သ​ဖြင် ​ထို​အ​ချိန်​မှ​စ​ပြီး ​ဒေ​သ​ခံ​ပြည်​သူ​များ​မှာ ​တင်း​ကြပ်​သည့် ​ထိန်း ​ချုပ်​မှု ​များ ​ဖြင့်​ရင်​ဆိုင်​နေ​ကြ​ရ​သည်။ ​အ​ဓိ​က​နယ်​စပ် ​ဖြတ်​ကျော်​ရာ​နေ​ရာ ​ဖြစ်​သည် ​ပန်​ခ​မး်​ဂိတ် ​ကို​လည်း ​ချဲ့​ထွင်​ခဲ့​ပြီး၊ ​ယင်း​နှင့် ​ကပ်​ရက်​တ​ရုတ်​ပြည် ​နယ်​စပ်​ဖက်​ခြမ်း​အ​တွင်း ​အ​ဝေး​ပြေး​လမ်း​မ​ကျယ်​ကြီး ​ကို​လည်း​ဆောက်​လုပ် ​လျက်​ရှိ​သည်။ ​ထို့အ​ပြင် ​န​မ့်​ခ​မ်း​မြို့​အ​နီး ​နယ်​စပ်​ဖြတ်​ကျော်​ရာ​နေ​ရာ​တွင် ​တံ​တား ​အ​သစ်​ကို​လ​ည်း​ဆောက်​လုပ်​လျက်​ရှိ​သည်။ ​ယင်း​တိုက်​ပွဲ​နောက်​ပို​ငး် ​ကျွန်း​သစ်​များ​အား ​တ​ရုတ်​ပြည်​အ​တွင်း​သို ​တ​ရား​မ​ဝင်​ပြန်​လည်​တင်​ပို့​ခြင်း​များ​လ​ည်း​ရှိ​လာ​သည်။
​ပြီး​ခဲ​သည့်ဧ​ပြီ​လ ​စစ်​ဆင်​တိုက်​ခိုက်​ခဲ​ချိန်​မှ​စ​၍ ​နမ့်​ခမ်း​မြို ့​နယ်​အ​တွ​ငး် ​စစ်​ဖက်​ဆိုင်​ရာ ​လုံ​ခြုံ​ရေး​များ ​တင်း​ကျပ်​စွာ ​ချ​ထား​ခဲ့​ပြီး ​မြန်​မာ​စစ်​တပ်​များ​မှ ​အ​ပြစ်​မဲ ့​ဒေ​သ​ခံ​ပြည်​သူ​များ​အား ​ပစ်​ခတ်​ခဲ့​သည် ​အ​ဖြစ်​အ​ပျက်​များ​လည်း​ရ​ခဲ့​သည်။ ​မ​ကြာ​သေး​ခင်​က ​ရွာ​သား ၅ ​ဦး​သည် ​နမ့်​ခ​မး်​မြို ့​အ​နောက်​ဖက်​ရိှ ​တ​ရုတ် ​ဓါတ်​ငွေ ့​ပိုက်​လိုင်း​ကို ​စောင့်​ကြပ်​သည်​မြန်​မာ​စစ်​သား​များ​မ ​ပစ်​ခတ်​ခဲ့​ခြင်း​ကြောင့် ​ထိ​ခိုက်​ဒါဏ်​ရာ ​ရ​ရှိ​ခဲ ့​ကြ​ပြီး၊ ​ပြီး​ခဲ ့​သည် ​ရက်​သ​တ္တ​ပတ်​က​လည်း ​နမ့်​ခမ်း​မြို ့​အ​ရှေ ့​ဖက်​ရှိ ​စစ်​ဆေး​ရေး ​ဂိတ်​ကို ​ဆိုင်​ကယ်​ဖြင့်​ဖြတ်​သွား​ရာ ​ပစ်​ခတ်​ခံ​ခဲ ့​ရ​ခြ​ငး်​ကြောင့် ​ဆိုင်​ကယ်​ပေါ်​ပါ ​အ​မျိုး​သ​မီး​မှာ ​သေ​ဆုံး​သွား​ခဲ့သည်။
​သို့ပါ​၍ ​ပ​ဋိ​ပ​က္ခ​ကို ​ပို​မို​ကြီး​ထွား​တောက်​လောင်​စေ​ရုံ​မျှ​မ​က ​ဒေ​သ​ခံ​ပြည်​သူ​လူ​ထု​များ​၏ ​အ​သက်​ရှင် ​နေ​ထိုင်​မူ​အ​ရေး ​ကို ​အ​န္တ​ရာယ်​ပြု​နေ​သည် ​ဤ​ကဲ့​သို ့​သော​စစ်​ဆင်​တိုက်​ခိုက်​မှု​များ​အား ​မြန်​မာ​စစ်​တပ်​မှ ​လုပ်​ဆောင်​နေ​ခြင်း ​ကို ​ရှမ်း ​လူ ့​အ​ခွင့်​အ​ရေး​မ​ဏ္ဍိုင်​မှ ​ပြ​ငး်​ထန်​စွာ ​ရှုတ်​ချ​လိုက်​သည်။
​မြန်​မာ​နိုင်​ငံ​မှ​ကျူးလွန်​နေ​သည့် ​လူ့​အ​ခွင့်​အ​ရေး​ချိုး​ဖောက်​မှု​များ ​အ​သေး​စိပ် (ဧ​ပြီင်္လ ၁၀ ​ရက်​နေ့​မှ ​ဇွန်​လ ၂ ​ရက်​နေ့​ထိ)
၂၀၁၄ ​ဧ​ပြီ​လ ၁၀ ​ရက်
​မော်​တာများ​ဖြင့် ​ပစ်​ခ​တ်ခြင်း ​နှင့် ​ရွာ​သား​ပိုင် ​ပ​စ္စ​ည်းဥ​စ္စာ​များ ​လု​ယူ​ခြင်း​ကြောင့် ​ရွာ​သား​ပေါ​င်း ၁၀၀၀ ကျော်​ခန့်ထွက် ​ပြေး ​တိ​မ်းရှောင်ခဲ့ရ
​စစ်​တပ်​အင်​အား ၁၀၀၀ ​ခန် ့​ဖြင့် ​ခြေ​လျင်​တပ်​မ ၈၈ ​မ ၄​ငး်​တို ့​တပ်​စွဲ​ရာ ​မန်​စီ​မြို ့​နယ် ​မန်​ဝန်း​လုံ(​မန်​ဝန်း​ကြီး) ​မြောက်​ဖက်​သို ့​ချီ​တက်​ကာ ​တပ်​စွဲ​ရာ ​ကော​ငး်​ခန် ​မှ​နေ​၍—- ​တ​ရုတ်​ပြည်​နယ်​စပ်​အ​နီး ​ပန်​ခမ်း ​တွင်​တပ်​စွဲ ​ထား​သည် KIA ​အား ​မော်​တာ​လက်​နက်​များ​ဖြင်​ဦး​တည်​ပစ်​ခတ်​ခဲ ့​သည်။ ​မော်​တာ​အ​ချက် ၁၀၀ ​ကျော် ​ခန် ​ကို ​မ​နက် ၈ ​နာ​ရီ ၃၀ ​မှ ​ည ၇ ​နာ​ရီ​အ​ထိ ​ပစ်​ခတ်​ခဲ့​သည်။ ​မော်​တာ​ကျည်​ဆံ​များ ​ကျ​ရောက်​ထိ​မှန်​ခဲ​သည် ​ရွာ​များ ​မှာ ​အောက်​ပါ​ရွာ​များ​ဖြစ်​သည်။
​ယင်း​ကဲ့​သို ့​ပစ်​ခတ်​ခဲ့​ခြင်း​ကြောင့် (​က​ချင်​ပြည်​နယ်) ​ထွန့်လွယ်​ဟို​ဆေ ​ဒေ​သ​အ​တွ​င်း ​ရှမ်း​ရွာ ၁၅ ​ရွာ​မ ​ရွာ​သား ၁၀၀၀ ​ကျော်​ခန့်​တို့မှာ ​အ​နီး​ရှိ ​ရှမ်း​ပြည်​နယ်​မြောက်​ပိုင်း ​နမ့်​ခမ်း​မြို ့​နယ်​အ​တွင်း​နှင့် ​တ​ရုတ်​ပြည်​နယ်​စပ်​ဖက်​သို့ထွက်​ပြေး ​တိမ်း​ရှောင်​ခဲ့​ကြ​ရ​သည်။ ​
ယင်း​သို ​ထွက်​ပြေး ​တိမ်း​ရှောင် ​ခဲ့​သည့် ​ရွာ​များ​မှာ
15. ​နောင်​လွန်း ​တို ့​ဖြစ်​ကြ​သည်။
တရုတ်ပြည်အတွင်းသို့ ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြသော ရှမ်းရွာသားများ
​ယင်း​တိုက်​ပွဲ​ဖြစ်​သည် ​ရက် ​ည ၈ ​နာ​ရီ ၂၀ ​မိ​နစ် ​ခန် ့​တွင် ​မြန်​မာ​စစ်​တပ်​များ​မှ ​နောင်​လွန်း ​ရွာ​အ​တွင်း ​ဝင်​ရောက်​ကာ​ရွာ​သား​ပိုင် ​ပ​စ္စည်း​ဥ​စ္စာ​များ ​အ​စား​သောက်​များ​အား ​လု​ယူ​ခဲ့​ကြ​ရာ ​ဆုံး​ရံှုး​သွား​သည် ​ပ​စ္စည်း​အ​ချို့မှာ ​အောက်​ပါ​အ ​တိုင်း​ဖြစ်​သည်။
1. ​စိုင်း​အန်း ​ပိုင်​ပ​စ္စည်း​များ​ဖြစ်​သည့် ​ဗီ​ဒီ​ယို ​ကင်​မ​ရာ​တစ်​လုံး ​နှင့် ​အ​ဝတ်​အ​စား​များ
2. ​စိုင်း​ယီ​မွ​နး် ​ပို်င် ​ကြက် ၃ ​ကောင်
3. ​ခင်း​ဆိုင်​ရွက်​ဟိန်း ​ပို်င် ​ကြက် ၂ ​ကောင်
4. ​စိုင်း​အိုက်​လင်း ​ထံ​မှ ​ဆာ​လာ​အိိတ်​တစ်​အိတ်​စာ ​အ​ပြည့် ​မုန့်​များ
၂၀၁၄ ​ခ ​ဧ​ပြီ​လ ၁၁ ​ရက်​နေ
​ဘု​န်းကြီး​ကျောင်း​များ၊ ​ရွာ​များ​အား ​မော်​တာ–​များ​ဖြင့်​ပစ်​ခ​တ်ခြင်း၊ ​ရွာ​သား​များ​အား ​ထိ​ခိုက် ​ဒါဏ်​ရာ​ရ​ရှိ​စေ​ခြ​င်း၊ ​နှင့် ​ရွာသား​ပိုင်​ပ​စ္စ​ညး်​ဥ​စ္စာ​များ​အား ​လု​ယူ​ခြ​င်း ​မီး​ရှို့ဖျက်​ဆီး​ခြင်း​များ
​မြန်​မာ​စစ်​တပ်​များ​မှ ​ဆက်​လက်​ကာ​မော်​တာ​ကျည် (120 mm) ၁၀၀ ​ကျော်​ခန့် ​ကို ​ကောင်း​လွယ်​ဟို​ဆေ​ဘုန်း​ကြီး​ကျောင်း ​ရှိ​ရာ​တောင်​ကုန်း​သို ့​ပစ်​ခတ်​ခဲ့​သည်။ ​ယင်း​မော်​တာ​ကျည်​များ​မှ ​နောင်​လွန်း​ရွာ​အ​တွင်း ​သို ​ကျ​ရောက်​ထိ​မှန်​ခဲ ့​ရာ ​အိမ်​တစ်​လုံး ​နှင် ​စိုင်း​အင်​သန်း ​ပိုင်​ထ​ရက်​ကား​ကြီး ​ပျက်​ဆီး​ဆုံး​ရး​သွား​သည်​အ​ပြင် ၄င်း​၏ ​အိမ်​နီး​ချ​ငး်​ပိုင်​ဆိုင်​သော ​ဥ​စ္စာ​ပ​စ္စ​ညး်​အ​ချို ့​မှာ​လည်း​ပျက်​ဆီး ​သွား​ခဲ ့​သည်။
​ထို ့​ပြင် ​နောင်​လွ​နး်​မ​နေ​၍ ​နောင်​ကျောင်း​ရွာ​သို့​မြန်​မာ​စစ်​တပ်​များ​မှ ​မော်​တာ​ကျည် ၁၀​ကျော်​ခန့် ​ပစ်​ခတ်​ခဲ့​ရာ ​သက်​ကြီး​အ​မျိုး​သ​မီး​တစ်​ဦး ​ဖြစ်​သည် ​နို​ငး်​မောက်​ဟေး​အိုင်​အိမ်​နှင့် ​အ​ခြား ​ပိုင်​ဆိုင်​ပ​စ္စည်း​များ​မှာ ​ပျက်​ဆီး ​သွား ​ခဲ ့​သည်။ ​ယင်း​မော်​တာ​ကျည်​မှ ​အ​ပိုင်း​အ​စ​များ​က​လည်း ​အ​သက် ၃၀ ​ရှိ ​စိုင်း​စစ်​၏ ​ခြေ​ထောက်​အား​ထိ​မှန်​သ​ဖြင့် ​စိုင်း​စစ်​အား ​တ​ရုတ်​ပြည်​ဖက်​ရှိ ​ဆေး​ရုံ​သို ့​ဆေး​ကု​သ​ရန် ​ပို ့​ဆောင်​ခဲ ့​ရ​သည်။
​ယင်း​တစ်​ရက်​ထဲ​၌​ပင် ​ည ၉ ​နာ​ရီ ၃၀ ​ခန် ့​တွင် ​မြန်​မာ​စစ်​တပ်​များ​မ ​မန်​နောင်​လွန်​ရွာ​နေ ​စိုင်း​လှ​ဝန်း ​ပိုင်​ဆိုင်​သော ​ကြံ​ခင်း ​အား​မီ​ရှို ့​ဖျက်​ဆီး​ခဲ ့​ကြ​သည်။ ​ထို ့​ပြင် ​ယင်း​မြန်​မာ​စစ်​တပ်​သည် ​နား​လုံ​ကျေး​ရွာ​မှ ​ရွာ​သား​ပို်င် ​ပ​စ္စည်း​များ ​အ​စား ​အ​သောက်​နှင့်​အ​ရက်​များ​ကို ​လု​ယူ​ခဲ ့​ကြ​ရာ ​ဆုံး​ရှုံး​သွား​သည့် ​ပ​စ္စ​ညး်​အ​ချို ့​မှာ​အောက်​ပါ ​ပ​စ္စ​ညး်​များ ​လည်း ​ပါ​ဝင်​သည်။
1. ​လွန်း​စင်း​ဆမ် ​ပို်င် ​ကြက် ၃ ​ကောင်
2. ​နိုင်း​ဆိုင်​ဟွာ ​ပိုင် ​ကြက် ၁ ​ကောင်
3. ​နိုင်း​မောက်​ခ​မး်​တင် ​ပို်င် ​ကြက် ၁ ​ကောင်
ဝမ်နောင်ကျွမ်းရွာမှ ကောက်ယူစုဆောင်းထားသော ပေါက်ကွဲမော်တာကျည် အပိုင်းအစများ
၂၀၁၄ ​ခု​နှစ် ​ဧ​ပြီ​လ ၁၂ ​ရက်​ဘု​န်း​ကြိး​ကျောင်း​အား ​လု​ယ​က်ခြင်း​နှင့် ​ရွာ​သား​များ​အား ​အ​ကြော​င်းမဲ့​ဖ​မ်းဆီး​ခြင်း
​မြန်​မာ​စစ်​တပ်​မှ ​ကောင်း​လွယ်​ဟို​ဆေ ​ဘုန်း​ကြီး​ကျောင်း​သို ့​သွား​ရောက်​ကာ ​ဘုန်း​ကြီး​ကျောင်း ​တံ​ခါး​အား ​ဖျက်​ဆီး​၍ဘုန်း​ကြီး ​ကျော​ငး်​အ​တွင်း ​ဒေ​သ​ခံ​ပြည်​သူ​လူ​ထု​များ​မှ ​လှူ​ဒါန်း​ထား​သော ​သို​လှောင်​ထား​သည် ​အ​စား​အ​သောက်​များ ​အား ​လု​ယူ​ခဲ ့​ကြ​သည်။
​ပန်​ခမ်း​ရွာ​မ ​သက်​ကြီး​ရွာ​သား​နှစ်​ဦး​သည် ​ယင်း ​ကောင်း​လွယ်​ဟို​ဆေ​ဘု​နး်​ကြီး​ကျောင်း​သို့​ပျက်​စီး​ဆုံး ​ရှုံး​သွား ​သည်​များ​ကို ​သွား​ရောက်​ကြည့်​ရှု​စစ်​ဆေး​ပြီး​အ​ပြန် ၄င်း​တို ့​နှစ်​ဦး​မှာ ​မြန်​မာ​စစ်​တပ်​များ​မ ​ဖမ်း​ယူ​ကာ ​စစ်​ဆေး​မေး ​မြန်း ​မူ​များ​ပြု​လုပ်​ခြင်း​ကို​ခံ​ခဲ့​ကြ​ရ​သည်။
၂၀၁၄ ​ခု​နှစ် ​ဧ​ပြီ​လ ၂၀ ​မှ၂၉ ​ရက်​နေ ့​အ​တွင်း
​ဒေ​သ​ခံ​ရွာ​သား​များ​၏ ​လက်​ကိုင်​ဖု​န်းများ​အား ​စစ်​သား​များ​၏ ​ဓါ​တပ်​များ​ပါ​မ​ပါ​စစ်​ဆေး​မှု​များ​ပြု​လုပ်
​မြန်​မာ​စစ်​တပ်​များ​မှ ​မူ​ဆယ်​မြို ့၊ ​နမ့်​ခမ်း​မြို ့​နယ်​နှင့် ​မန်​ဝိန်း​လုံ ​အ​တွင်း ​စစ်​ဆေး​ရေး ​ဂိတ်​များ​ချ​ထား​ခဲ ့​သည်။ ​ယင်း​စစ်ဆေး​ရေး​ဂိတ်​များ​မ ​လမ်း​မ​ပေါ်​တွင် ​ဖြတ်​သန်း​သွား​လာ​သော ​ဒေ​သ​ခံ​ရွာ​သူ​ရွာ​သား​များ​၏ ​ဖုန်း​များ​အား ​စစ်​သား​ပုံ​များ ​တိုက်​ပွဲ​နှင့်​ပက်​သက်​သော ​ဓါတ်​ပုံ​များ ​ပါ​မ​ပါ​ကို ​စစ်​ဆေး​မူ​များ​ပြု​လုပ်​ခဲ့​ကြ​သည်။ ​အ​ကယ်​၍​ယင်း​သို ​တိုက်​ပွဲ​နှင့် ​ပက်​သက်​သည် ​ဓါတ်​ပုံ​များ ​တွေ ့​ရှိ​ပါ​က ​ယင်း​ဖုန်း​အ​တွင်း​မှ ​ဆင်း​ကဒ် (sim cards) ​များ​အား ​မြန်​မာ​စစ်​သား​များ​မှ ​သိမ်း​ယူ​ထား​လိုက်​ကြ​သည်။ ​တစ်​ချို ့​ဖုန်း​များ​မှ ​ဘက်​ထ​ရီ​များ​ကို​လ​ညး် ​ဓါတ်​ပုံ​မ​ရိုက်​နိုင်​ရန် ​ဖြုတ်​ယူ​ထား ​ခြင်း​များ ​ခံ​ခဲ ့​ရ​သည်။
၂၀၁၄ ​ဧ​ပြီ​လ ၂၅ ​ရက်
​ရှ​မ်းရွာ​သား​များ​အား ​က​ချင်​စစ်​ပြေး​ဒု​က္ခ​သည်​များ​က​မောင်း​ထုတ်​ရန် ​ဖိ​အား​ပေး​ခြ​င်း
​မြန်​မာ​စစ်​တပ်​မှ ​နမ့်​ဟီး​ရွာ ( ​က​ချင်​စစ်​ပြေး​ဒု​က္ခ​သည်​စ​ခန်း ​လ​ဂျက်​ယန် ​တည်​ရှိ​ရာ​နေ​ရာ) ​မှ ​ရွာ​လူ​ကြီး​များ​အားခေါ်​ယူ​ကာ “ ​က​ချင်​ဒု​က္ခ​သည်​တွေ​ကို ​ခင်​ဗျား​တို ့​ရွာ​ထဲ​မှာ ​မ​နေ​စေ​ချင်​ရင် ​ကျွန်​တော်​တို ့​စစ်​တပ်​ဆီ​ကို ​စာ​ရေး​ပြီး​တောင်း ​ခံ​လို့ရ​တယ်။ ​ခင်​ဗျား​တို ့​အဲ​လို​စာ​ရေး​ရင် ​စစ်​တပ်​က​နေ​ပြီး​တော့ ​ဒု​က္ခ​သည်​စ​ခ​နး်​ကို ​မီး​ရှို ့​ဖျက်​ဆီး​ပေး​လို ့​ရ​တယ်၊ ​အဲ​ဒါ​ဆို ​သူ​တို ့​နာ​ရီ​ပိုင်း ​တွင်း​မှာ​ဘဲ ​ပြောင်း​သွား​ကြ​လိမ့်​မယ်” ​ဟု​ပြော​သည်။ ​သို ့​သော်​လည်း ​ယင်း ​ရှမ်း​ရွာ​လူ​ကြီး​များ​မှာ ​ယင်း​သို ့ု​ပြု​လုပ်​ရန်​သ​ဘော​မ​တူ​ခဲ ့​ပေ။
၂၀၁၄ ​ဧ​ပြီ​လ ၂၅
​တ​ရုတ် ​ဓါတ်​ငွေ ့​ပိုက်​လို​ငး်​အ​နီး ​ပစ်​ခ​တြ်​ခ​ငး်​ကြောင် ​မီး​သေးွ ​ရော​ငး်​သ​မား ၄ ​ယောက်​ဒါဏ်​ရာ​ရ ​မ​နက် ၄ ​နာ​ရီ ၃၀ ​ခန့်​တွင် ​နမ်​ခမ်း​မြို့​အ​နောက်​မြောက်​ဖက် ၆ ​မိုင်​အ​ကွာ၊ ​တ​ရုတ် ​ဓါတ်​ငွေ ့​ပိုက်​လိုင်း​နှင့် ​မိုင်
​ဝက်​အ​ကွာ ​ကွန်း​ကတ်​ရွာ​အ​နီး​ရှိ ​လွိုင်​ဇက် ​ဒေ​သ​အား ​လူ ၆ ​ဦး​ပါ​သည် ​မီး​သွေး​များ​တင်​ဆောင်​လာ​သော ​ထ​ရပ်​ကား ​သည် ​တော​ထဲ​မှ ​နမ့်​ခမ်း​မြေ ့​သို ့​သွား​ရန်​ဖြတ်​သန်း ​သွား​သည်။ ——– ​လွိုင်​ဇက်​သို ့​ရောက်​သော ၄င်း​တို ့​ကား​အား ​လမ်း​ဘေး​သို ့​ရပ်​ရန် ​မြန်​မာ​စစ်​သား ​များ​မှ​တား​ခဲ ့​သည်။ ​လမ်​ဘေး​တွင် ​ဆိုင်​တစ်​ဆိုင်​ရှိ​ရာ ​ယင်း​ဆိုင်​အ​တွ​ငး် ​အ​ရပ်​သား ​ဝတ်​စုံ​ဝတ်​ဆင် ​ထား​သော ​မြန်​မာ​စစ်​သား​များ​အ​ချို ့​မှာ ​လမ်း​အား ​ကင်း​စောင့််​ရန်​နေ​ရာ​ယူ​ထား​သည်။
​ယင်း​သို့ ​တား​ရာ ​ကား​အား​ရပ်​ပြီး​နောက် ​အ​နီး​ရ ​တောင်​ကုန်း​ပေါ်​မှ ​မြန်​မာ​စစ်​သား​များ ​အုပ်​စု​နောက်​တစ်​စု​မှ ​ရုတ်​တ ​ရက် ​သေ​နတ်​များ ​မော်​တာ​လက်​နက်​များ​ဖြင့် ၄င်း​တို ့​ထ​ရက်​ကား​အား ​ပစ်​ခတ်​ခဲ ့​ရာ၊ ​ကား​ပေါ်​တွင်​ပါ​လာ​သော ​ရွာ ​သား ၄ ​ယောက်​မှာ ​ဒါဏ်​ရာ​ပြင်း​ထန်​စွာ ​ရ​ရ​ခဲ ့​သ​ဖြင့် ​နမ့်​ခမ်း​ဆေး​ရုုံ​ကြီး​သို ့​ပို ့​ဆောင်​ခဲ ့​ကြ​သည်။ ​ယင်း​သို ့​ထိ ​ခိုက်​ဒါဏ်​ရာ​ရ​ခဲ ့​သူ​များ​မှာ
1. ​မိုင်း​ဝီး​မြို့နယ် ​မန်​လုံ​ကျေး​ရွာ​နေ ​အ​သက် ၂၀ ​အ​ရွယ် ​မိုင်​အိုက်​ယိန်း​ဖြစ်​ပြီး ၄​င်းမှာ ​ခြေ​သ​လုံး​တွင် ​ထိ ​ခိုက်​ဒါဏ်​ရာ ​ရ​ခဲ့​သည်။
2. ​မိုင်း​ဝီး​မြို့​နယ်​မှ ​အ​သက် ၂၅ ​နှစ်​အ​ရွယ် ​အိုက်​ကွန် ​မှာ ​ပေါင်​တွင် ​ထိ​ခိုက်​ဒါဏ်​ရာ​ရ​ရ​ခဲ့​သည်။
3. ​ပိန်း​ကန်​ရွာ​မ ​အ​သက် ၃၀ ​အ​ရွယ် ​စိုင်း​အိုက်​ကမ်​မှာ​လည်း ​ပေါင်​တွင် ​ဒါဏ်​ရာ​ရ​ရ​ခဲ့​ပြီး
4. ​မိုင်း​ဝီး​မြို ့​နယ်​မှ ​အ​သက် ၃၅ ​နှစ်​အ​ရွယ် ​ဦး​ရော​ထွန်း ​မှာ ​ဦး​ခေါင်း၊ ​လည်​ဂုတ် ​နှင့် ​ခြေ​ထောက်​နှစ်​ဖက်​တွင်
​ပြင်း​ထန်​စွာ​ထိ​ခိုက်​ဒါဏ်​ရာ ​ရ​ရှိ​ခဲ ့​ရာ ၄င်း​အား ​တ​ရုတ်​ပြည်​အ​တွင်း​ရှိ ​ဆေး​ရုံ​သို ့​အ​ထူး​ကု​သ ​ရန်​ပို ့​ဆောင်​ခဲ့ ​ရ​သည်။
​ထို့အ​ပြင် ​လမ်း​အား​စောင့်​ကြပ်​နေ​သည် ​မြန်​မာ​စစ်​သား ​တစ်​ဦး​ဖြစ်​သည် ​က​ရင်​လူ​မျိုး​ဖြစ်​သူ ​အ​သက် ၂၇ ​နှစ်
​အောင်​ဗို​ဗို ​မှာ​လ​ညး် ​ဦး​ခေါ​ငး်​တွင် ​သေ​နတ်​ဒါဏ်​ရာ​ထိ​မှန်​ခဲ့သည်။
၂၀၁၄ ​ခု ​မေ​လ ၇ ​ရက်
​တ​ရုတ် ​ဓါတ်​ငွေ့​ပိုက်​လို​င်းအား ​လုံခြုံရေး​ယူ​က​င်းစောင့်​နေ​သည် ​မြန်​မာ​စစ်​သား​များ​က ရွာသားတ​ဦး​ကို​လက်​ပစ်​ဗုံး​ဖြင့် ​ပစ်
ည​နေ​ခ​င်း ၂ ​နာ​ရီ ၃၀ ​ခန့် ​အ​ချိန်​တွင် ​အောင်​မေ​တ္တာ​ရွာ​နှင့် ​ကွန်​လုံ ​ဒေ​သ ​ကြား​ရ ​တ​ရုတ် ​ရေ​နံ​ဓါတ်​ငွေ့ပိုက်​လိုင်း​အား
​မြန်​မာ​စစ်​တပ်​များ​မှ ​လုံ​ခြုံ​ရေး​ယူ​က​ငး်​စောင့်​နေ​ကြ​သည်။ ​ထို​အ​ချိန်​တွင် ​ယင်း​စစ်​သား​များ​က ​ယာ​ခင်း​သို ့​သွား​နေ​သော
​အောင် ​မေ​တ္တာ​ရွာ​မှ ​အ​သက် ၅၂ ​အ​ရွယ် ​အောင်​ညွန် ့​ကို ​လက်​ပစ်​ဗးုံ​ဖြင့် ​ပစ်​ရာ ​ပေါက်​ကွဲ​ပြီး ​ယင်း​ရွာ​သား​အား ​ထိ​မှန်​ခဲ​သည်။ ​အောင်​ညွန် ့​မှာ ​ပြင်း​ထန်​စွာ​ဒါဏ်​ရာ​ရ​သ​ဖြင့် ၄င်း​အား​မူ​ဆယ်​ဆေး​ရုံ​သို ့​ပို ့​ဆောင်​ခဲ ့​ရ​သည်။
၂၀၁၄ ​ခု ​မေ​လ ၉ ​ရက်
​မြန်​မာ​စစ်​တပ်​မ ​မော်​တာ​ကျည်​နှစ်​လုံး​နှင့် ​သေ​နတ်​များ​ဖြင့် ​ပန်​ခမ်း​ရွာ ​အ​နီး​ပစ်​ခတ်​ခဲ့​ရာ ​ပန်​ခမ်း​ရွာ​သား ​ဖြစ်​သူ ​အ​သက် ၂၀ ​ရ ​စိုင်း​အိုင်​ကွန်း ​အား​ထိ​မှန်​ခဲ့သည်။ ​ဤ​ဖြစ်​ရပ်​ကြောင့်​ဒေ​သ​ခံ​ပြည်​သူ​များ​မှာ ​ရွာ​အ​နီး​ရှိ​တော​များ ​အ​တွင်း ​သို့​သွား​ရောက်​ရန်​ကြောက်​ရွံ့​နေ​ကြ​သည်။
၂၀၁၄ ​မေ​လ ၂၉ ​ရက်
​နမ့်​ခ​မ်း​မြို့အ​နီး ​မြန်​မာ​စစ်​တပ်​မှပစ်​ခတ် ​သ​ဖြင့်​အ​မျိုုး​သ​မီး​တစ်​ဦး ​သေ​ဆုံး
​ပြီး​ခဲ့သည် ​မေ​လ ၂၉ ​ရက်​နေ ့​တွင် ​နမ့်​ခမ်း​မြို ့​နယ်​အ​နီး ​စစ်​ဆေး​ရေး​ဂိတ်​အား ​ဆိုင်​ကယ်​ဖြင့် ​ဖြတ်​သွား​သော ​လင်​မ​ယား​နှစ်​ဦး​အား ​တပ်​မ ၈၈ ​မှ ​မြန်​မာ​စစ်​သား​များ ​ပစ်​ခတ်​ခြင်း​ကြောင့်် ​ဇ​နီး​ဖြစ်​သူ​မှာ ​သေ​နတ်​ဒါဏ်​ရာ​ဖြင့် ​သေ​ဆုံးသွား​ခဲ့သည်။
​ဖြစ်​ပျက်​ခဲ့​သည်​မှာ ​နမ့်​ခ​မ်း​မြို့နယ် ​နမ်​ဇန့်ရွာ​မ ​ခင်​ပွ​န်းသည်​ဖြစ်​သူ ​ဦး​အား​ရင် ​နှင့် ​ဇ​နီး​အေး​ထေး ​တို့သည် ​နမ့်​ခမ်း​သို့ ​ဆိုင်​ကယ်​ဖြင့်​သွား​ရာ ​ကောင်း​ဝိ​န်းရွာ​အ​ဖြတ် ​မြန်​မာ​စစ်​သား​များ​မှ၄င်း​တို ့​အား ​လက်​ပစ်​ဗုံး​တစ်​လုံး ​နှင့် ​သေ​နတ်​များ​ဖြင့် ၁၀ ​ချက်​ကျော်​ပစ်​ခတ်​ခဲ ့​ရာ ​လင်​မ​ယား​နှစ်​ဦး​စ​လုံး ​ပြင်း​ထန်​စွာ ​ဒါဏ်​ရာ​ရ​ရှိ​ခဲ့​သည်။ ​ထို ့​နောက်​ဇ​နီး​ဖြစ်​သူ ​အေ​ထေး​မှာ ​ပြ​င်းထန်​သည့်​ဒါဏ်​ရာ ​များ​ကြောင် ​မေ​လ ၃၀ ​ရက်​နေ့တွ​င်​ကွယ်​လွန်​သွား​ခဲ့​သည်။
မေလ ၂၉ ရက်နေ့တွင် နမ့်ခမ်းမြို့အနီး ဆိုင်ကယ်စီးလာစဉ် မြန်မာစစ်သားများမှ ပစ်ခတ်သဖြင့် သေနတ်ထိမှန်ကာ သေဆုံးသွားသူ အေထေး
၂၀၁၄ ​ဇွန် လ ၂ ​ရက်​နေ့
​နမ့်​ခမ်း​မြို့​အ​ရှေ့ ​ဘက်​ခြမ်း​ရှိ​တောင်​ကူန်း​များ ​အ​တွင်း ​မော်​တာ​များ​ဖြင့်​ပစ်​ခေတ်​ခြင်း​ကြောင့် ​ရွာ​သား​များ ​လယ်​ယာ​စိုက်​ပျိုး​မှု​များ​ပြု​လုပ်​ရန် ​အ​နှောက်​ယှက်​ဖြစ် ​ဇွန်​လ ၂ ​ရက်​နေ ့​မ​နက် ၁၁ ​နာ​ရီ​ခန် ့​တွင် ​မြ​န​မာ​စစ်​တပ်​မ M79 ​မော်​တာ​ဖြင့် ၄ ​ကြိမ် ​ခန့် ​နမ့်​ခမ်း​မြို ့​အ​ရှေ ့​ဖက် ၂ ​မိုင်​ခန် ့​ရှိ ​တောင်​ကုန်း​များ​ပေါ်​သို ့​ပစ်​ခတ်​ခဲ့​ရာ၊ ​ယင်း​တောင်​ကု​နး်​တစ်​ဝိုက် ​သစ်​တော​များ​အ​တွင်း ​ထင်း​ခွေ​ရန် ​နှင် ့၄င်း ​သို ့​ခြံ​များ​ယာ​များ​သို ့​သွား​ရန် ​ကြောက်​ရွံ ့​နေ​ကြ​သည်။
​ယင်း​တစ်​ရက်​ထဲ​၌​ပင် ​နမ့်​ခမ်း​နှင့် ​မို​ငး်၀းီ​မြို ့​ကြား​ရှိ ​တ​ရုတ် ​ဓါတ်​ငွေ ့​ပိုက်​လို​ငး်​ကို ​လုံ​ခြုံ​ရေး​ယူ​ရန် ​မြန်​မာ​စစ်​သား ၇၀-၈၀ ​ခန် ့​အား​တ​ငေ်​ဆာင်​သည့် ​စစ်​ထ​ရပ်​ကား ၃ ​စီး​မှာ ​နမ်​ခ​မး်​မြို့ ​မှ​ထွက်​ခွာ​သွား​သည်။
​ဧ​ပြီ​လ ​တိုက်ပွဲနှင့်ပတ်သက်ပြီးရွာသား​များ​အ​မြင် ( ၂၀၁၄ ​မေ​လ ​အ​တွင်း​မေး​မြန်း​ခဲ့​သည်)
​နား​ဟီး​ရွာ​မ ​ရွာ​သား​တစ်​ဦး​မ “ ​မြ​န်​မာ​အာ​ဏာ​ပင်​တွေ​က​ပြော​တယ် ​သူ​တို ့​ဒီ​ဒေ​သ​ထဲ​မှာ ​သန်း​ခေါင် ​စား​ရ​င်း​ကောက်​မယ်၊ ​ဒါ​ပေ​မဲ KIA ​က​ခွင့်​မ​ပြု​ဘူး။ ​အဲ​ဒီ​နောက် ​မြန်​မာ​စစ်​တပ် ​တပ်​မ ၈၈ ​က ​တပ်​ရင်း​မူး​က​နေ​ပြီး​တော ​ကျွန်​တော​တို ့​ကို ​ပန်​ခမ်း​မှာ ​ရှိ​တဲ KIA ​တပ်​ရ​ငး်​မှူး ​ဆီ​ကို​ပို ့​ဖို ့​စာ​ပေး​တယ်။ ​စာ​ထဲ​မှာ ​တစ်​ကယ်​လို့ KIO/KIA ​က​နေ​ပြီး
​တော့ ​ဒီ​ဒေ​သ​အ​တွ​ငး်​မှာ ​သန်း​ခေါင်​စား​ရင်း​ကောက် ​တဲ ့​အ​ဖွဲ ့​ကို ​ပေး​မ​ဝင်​ဘူး ​ဆို​လို ့​ရှိ​ရင် ​သူ​တို ့​အ​နေ​နဲ ​စစ်​တပ်​က
​လုံ​ခြုံ​ရေး ​နဲ ့​ဘယ်​လို​နည်း​ဖြင့်​မ​ဆို ​ဝင်​မှာ​ဖြစ်​တယ်​လို ့​ပြော​ထား​တယ်။ ​ကျွန်​တော်​တို ့​လဲ KIA ​ဆီ​ကို ​အဲ​ဒီ​စာ​ယူ ​သွား
​ပေး​ပြီး KIA​က​နေ ​ပြီး​တော့ ​အ​ထက်​နဲ ​ဆွေး​နွေး​မယ်​လို ့​ပြော​တယ်။ ​အဲ​ဒီ​နောက် KIA ​က​နေ​ပြး​တော့​မှ ​မြန်​မာ​စစ်​တပ် ​တပ်​ရ​ငး်​မှူး​ဆီ​ပြန်​ပြော​တယ်၊ KIA ​အ​နေ​နဲ့ ​သန်း​ခေါင်​စား​ရင်း​ကောက် ​တာ​ကို ​ခွင့်​ပြု​တယ် ​ဒါ​ပေ​မဲ ​သူ​တို (KIA) ​ထိန်း ​ချုပ် ​နယ်​မြေ​ထဲ​မှာ​မ​ဟုတ်​ဘူး။ ​ပြီး​တော့​သ​နး်​ခေါင်​စား​ရင်း​ကို ​မန်​ဝိ​နး်​မြို့ ( ​မြန်​မာ​စစ်​တပ်​ထိန်း​ချုပ်​ရာ​နေ​ရာ) ​ထဲ​မှာ​ဘဲ​ပြု ​လုပ်​ရ​မယ်​လို ့​ပြော​တယ်။ ​ကျွန်​တော်​တို့ ​ထင်​တာ ​က​တော ​တိုက်​ပွဲ​ဖြစ်​တာ​က ​မြန်​မာ​စစ်​တပ်​က​နေ​ပြီး​တော ​ဒီ​နေ​ရာ
​ဒေ​သ​ကို ​အ​ကျိုး​စီး​ပွား ​အ​တွက် ​ထိန်း​ချုပ်​ချင်​တာ​ဖြစ်​တယ်။ ​အ​ခု​ဆို​ရင် (​က​ချင်​ပြည်​နယ် ​ပန်​ခ​မး် ​မှ) ​တ​ရုတ်​ပြည်​နယ်​စပ် ​ဖက်​ပို​ငး်​မှာ ​အ​ဝေး​ပြေး​လ​မး်​မ​ကြီး​လဲ ​ဆောက်​နေ​တယ်” ​ဟု​ပြော​သည်။
​ပန်​ခမ်း​မှ ​ရွာ​သား​တစ်​ဦး​ပြော​ကြား​ချက်​အ​ရ ​မြန်​မာ​စစ်​တပ်​များ​သည် ​ပန်​ခ​မး်​အ​တွ​ငး် ​နေ​ထိုင်​သည် ​ဒေ​သ​ခံ​များ​အား​ပြည်​သူ ့​စစ်​ဖွဲ ​ရန်​အား​ပေး​လျှက်​ရ​ရာ ​ယ​ခု​အ​ချိန်​အ​ထိ ​ဒေ​သ​ခံ​များ​မှာ ​လက်​မ​ခံ ​သေး​ကြောင်း​ပြော​သည်။
ပန်ခမ်း နယ်စပ်ဒေသကို မြန်မာစစ်တပ်မှ ထိန်းချုပ်ခဲ့ပြီးနောက် မြန်မာပြည်မှ တရုတ်ပြည်အတွင်းသို့ ပြန်လည်တင်သွင်းသည့် သစ်များ